Fankatoavana DMCA | Fifamoivoizana hiara-miasa
Ity manaraka ity dia mamaritra ny fanarahan-dalàna DMCA ho an'ny My Traffic Blog tranonkala.
09/24/2021 02:25 maraina GMT
Izahay ao amin'ny My Traffic Blog dia manolo-tena hamaly izay voalaza fa fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona raha sendra misy izany. Ny fampandrenesana fa misy ny fanitsakitsahana dia tokony handray ny endrika naroson'ny US Digital Millennium Copyright Act araka ny naseho tao amin'ny http://www.copyright.gov.
Raha misy zavatra manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona na iza na iza tafintohina, dia azonay esorina ny My content Traffic Blog, ajanony ny fidirana ao aminy, atsaharo na sakano ny fidirana ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny atiny, ary / na hetsika hafa heverina fa mety. Azontsika atao koa ny mandefa ny firaketana an-tsoratra ny zava-nitranga ho an'ny antontan-taratasy sy / na havoakan'ny antoko fahatelo araka ny hevitray.
Tsy torohevitra ara-dalàna / tsy misy fifandraisana amin'ny mpahay mpisolovava
Raha mino ianao fa voahitsakitsaka ny zonao, dia mety ho raharaha lehibe izany. Ity fampandrenesana DMCA ity dia misy fotsiny mba hanatanterahana ny ezaka ataontsika, toy ny tranonkala tompona, hisorohana sy hanafoanana ny fanitsakitsahana ny zon'ny fananana ara-tsaina. Tsy mahasolo ny fanampian'ny mpanolotsaina ara-dalàna mahefa izany. Ireo vahaolana sy hetsika hafa, toy ny fanoherana ny mpanome tolotra internet (ISP), dia mety misy. Azonao atao ny mangataka fanampiana ara-dalàna eo noho eo.
Ho an'ny mahamety anao sy ny vahaolana haingana, ny fampandrenesana ny fandikan-dalàna dia mety hatolotra ny My Traffic Blog amin'ny alàlan'ny mailaka, amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka sy / na mombamomba anao tranonkala. Mampitandrina izahay fa tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana ara-dalàna sy mahazatra rehetra ianao, ary koa ny saram-pitsarana sy ny saram-pandrika raha toa ka diso ny filazanao fa voahitsakitsaka ny zon'ny mpamorona anao. Nomena loka enina isa noho ny fitarainana diso, noho izany dia anoroana ny fanampian'ny mpanolo-tsaina mahay.
Raha heverinao fa mbola te hanamafy ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona ianao dia tokony hanome izao manaraka izao hanafainganana ny fizotrany:
STEP 1. Fantaro amin'ny antsipiriany feno ilay zavatra manana zon'ny mpamorona izay heverinao fa voahitsakitsaka, amin'ny alàlan'ny fanomezana ny URL ho an'ny asa arovana, ISBN #, na hafa.
STEP 2. Fantaro ny URL an'ny pejin-tranonkala izay lazainao fa manitsakitsaka ny asa zon'ny mpamorona voatanisa ao amin'ny laharana # 1 etsy ambony.
STEP 3. Omeo fampahalalana ho an'ny fifandraisana (aleonao ny adiresy mailaka, soso-kevitra ny telefaona).
STEP 4. Omeo fampahalalana ampy ahafahantsika mampandre ny tompona / mpitantana ilay pejy voalaza fa manitsakitsaka na atiny hafa toy ny bilaogy na famoahana forum (aleonao ny adiresy mailaka).
STEP 5. Ampidiro ity fanambarana manaraka ity: "Mino aho fa ny fampiasana ireo fitaovana manana zon'ny mpamorona voalaza etsy ambony izay voalaza fa nandika lalàna dia tsy nomen'ny tompon'ny zon'ny mpamorona na ny maso ivoho na ny lalàna."
Dingana 6. Ampidiro izao fanambarana manaraka izao: . ”
STEP 7. Sonia ara-bakiteny ny fanamafisanao.
Mariho fa ny antoko misolo tena ireo voakasik'izany tranonkala na mpamatsy atiny dia afaka mamoaka fampandrenesana fanoherana eo ambanin'ny fizarana 512 (g) (2) sy (3) amin'ny Digital Millennium Copyright Act, ary noho izany dia afaka mandefa na mampifandray ny atiny amin'izany tranga izany indray izahay.
Ho an'ny mahamety anao, ny fampandrenesana fanoherana dia mety hotolorana amin'ny alàlan'ny mailaka, amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka sy / na fampahalalana momba ny fifandraisana atolotra amin'ity tranonkala ity. Mampitandrina izahay fa tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana ara-dalàna sy mahazatra rehetra ary koa ny saram-pitsarana sy ny saram-pisolovava, raha diso ny filazanao fa TSY voahitsakitsaka ny zon'ny hafa.
Raha heverinao fa mbola te-hanao fampandrenesana fanoherana ianao dia tokony hanome izao manaraka izao hanafainganana ny fizotrany:
STEP 1. Fantaro ireo URL manokana na fampahalalana miavaka hafa momba ny fitaovana izay nesorinay na nalainay tsy ho tafiditra.
STEP 2. Omeo ny anaranao, ny adiresinao, ny nomeraon-telefaona, ny adiresy mailakao, ary ny fanambarana iray fa ekenao ny fahefan'ny fitsarana distrika federaly ho an'ny distrika fitsarana misy ny adiresinao, ary hanaiky ny serivisy fanodinana avy amin'ilay olona ianao izay nanome fampandrenesana ambanin'ny zana-pizarana (c) (1) (C) na masoivohon'ny olona toy izany.
STEP 3. Ampidiro izao fanambarana manaraka izao: kilemaina, na ny fitaovana nofaritan'ny mpitaraina dia nesorina na tsy nety tamin'ny URL voatondro ka tsy haseho intsony. ”
STEP 4. Manaova sonia ara-bakiteny ny fanamafisana.
FANAMARIHANA FANOVANA: Toy ny amin'ny fampilazana ara-panjakana sy ara-dalàna anay pejy, ny atin'ity pejy ity dia afaka ary hiova rehefa mandeha ny fotoana. Araka izany, ity pejy ity dia afaka mamaky hafa amin'ny fitsidihanao manaraka. Ilaina ireo fanovana ireo, ary tanterahan'ny My Traffic Blog, mba hiarovana anao sy ny tranonkalako My Traffic Blog. Raha zava-dehibe aminao ity pejy ity dia tokony hijerena matetika ianao satria tsy misy fampandrenesana hafa momba ny atiny voaova omena na alohan'ny na aorian'ny fiatraikany.
FAMPITANDREMANA COPYRIGHT: Ny fanamarihana ara-dalàna sy ny fitantanan-draharaha pejy ato amin'ity tranonkala ity, anisan'izany ity iray ity, no navoakan'ny mpisolovava tamim-pahazotoana. Izahay ato amin'ny My Traffic Blog dia nandoa vola mba hanomezana alalana ny fampiasana ireo fampandrenesana sy fitantanan-dalàna ireo pejy ao amin'ny Blog My Traffic ho fiarovana anao sy anay. Ity fitaovana ity dia mety tsy hampiasaina amin'ny antony na inona antony ary ny fampiasana tsy nahazoana alàlana dia nopetahana tamin'ny alàlan'ny Copyscape mba hahitana ireo mpandika lalàna.